Indlela yokulawula i-Amazon search ranking system?
Isikhundla esiphezulu semveliso kwi-Amazon sinokulingana nemali ephezulu yokuthengisa njengoko abasebenzisi abaninzi bechofoza kwimiphumo yokuqala abayibonayo kwi-Amazon SERP abaphendula njengendlela ephezulu. Ukwenza imveliso yakho ibonakale kwikhasi lekhasi lokukhangela, kufuneka uqonde indlela i-A9 ye-A9 yokusesha ngayo i-algorithm isebenza ngayo.
Kule nqaku, siza kuxubusha umgaqo othile wokusebenza we-Amazon usetyenziso lwe-algorithm kwaye ujonge ingqalelo nganye kwindawo.
I-A9 okanye i-Amazon yokusesha i-algorithm
Ngokwe-uphando olutsha olwenziwa yi-PowerReviews, abathengi abangaphezu kwe-1 000 base-US baqala ukukhangela kwi-Amazon. I-Google ivela kwisibini esondeleyo, ilandelwa ngamanye amazwe athengiswayo. Abo bantu baqala uphando lwabo lwemveliso kwi-Amazon, bachaza ukhetho lwabo ngokukhethwa kwemveliso ekhoyo, ukuphononongwa, ukuthunyelwa kwamahhala, kunye nokusebenza.
Olu phando lubonisa indlela enamandla ngayo le ndawo yokuthengisa kwiwebhu. Inika amathuba amaninzi kunye neenzuzo kubathengisi. Nangona kunjalo, udinga ukulwa nomncintiswano wakho wezoshishino ukwenza izinto zakho zibonakala kwi-Amazon SERP.
Ukuze ukhuphisane, kufuneka ukwazi ukuba i-Amazon A9 algorithm isebenza njani. Okokuqala, kufuneka kuqatshelwe ukuba i-A9 ihluke ngokupheleleyo kwi-Google. Xa umthengi efuna umkhiqizo ofunekayo kwi-Amazon, iziphumo zophando zithunyelwa ngeendlela ezimbini. Kwinqanaba lokuqala, abasebenzisi bafumana ezifanelekileyo kakhulu kwiziphumo zemibuzo kwiikhathalogu. Kwinqanaba lesibini, zonke iziphumo zikhethwe ngokubhekiselele ekuhambeleni nasekuthandeni. Injongo ephambili ye-Amazon kukunyusa ingeniso yenkampani jikelele kumthengi ngamnye. Ukuba ivenkile yakho ye-intanethi ivelisa imali engaphezulu kwi-Amazon, inokwenzeka ukuba izakubeka kwi-TOP kwikhasi lekhasi lokukhangela. I-Amazon iqhubeka isebenza phantsi kobuchule bokuphucula i-algorithm. Okwangoku, baqwalasela izinto ezinjengezibonelelo zokungabikho komsebenzisi, uhlalutyo lwenkqubo, amashrikhi amashishini abalulekileyo kunye neemitha zamatriki.
Izinto ezibalulekileyo ze-Amazon search ranking algorithm
Izinto ezinokuchaphazela izinga lokuguquka ziquka ukuhlaziywa, umgangatho, kunye nobukhulu bemifanekiso kunye nomgaqo-nkqubo wexabiso. Ukuba ungathanda ukuba nezinga eliphezulu lokuguqulwa, kufuneka ugcine amaxabiso akho akhuphisanayo. Ngaphezu koko, kubalulekile ukuvelisa impendulo emihle kwimveliso yakho njengoko inika ingcamango yabathengi abathengi ngegama lakho.
Into ebalulekileyo eyatshela i-Amazon xa iqwalasela iphepha lakho lemveliso kwisiphumo sokukhangela lihambelana. Yingakho zonke iimveliso zakho kufuneka zifikelele ngokufanelekileyo kumbuzo womsebenzisi. Ukuphucula le nto, kufuneka usebenze phantsi kwesihloko sakho kunye nenkcazo kunye naphantsi kohlu lwakho. Zonke ezi candelo zifuna ukulungiswa kakuhle kwaye zibandakanye amagama akho okukhangela.
Ezi zinto zinceda ukugcinwa kwabathengi kubandakanya impendulo yomthengisi kunye nomlinganiselo wesiphene. Ngoko, imfihlelo ilula. Kufuneka ukwanelise iimfuno zakho zabaxhasi, kwaye ziya kubuya kuwe. Ukuphononongwa okuthe xaxa ekuhlanganiseni kwiphepha lakho, amathuba amaninzi uza kutsala abaninzi abathengi abakwikhasi lakho Source .